HomeWararka MaantaDavid Beckham Oo Kaymaha Brazil Ku Metelay Film Cabsi Leh
Laacibkii hore ee xulka qaranka Ingiriiska, David Beckham ayaa soo bandhigay sawirrada fil uu ku dhex matalay kaymaha Amazon ee wadanka Brazil, kaas oo ay ka dhex muuqdaan qaar ka mid ah dadka deegaankaas deggan.
Film-kam oo ah documentary waxa la metelay maalin, laakiin qayb ka mid ah waxa sii dhacaysay qorraxda, waxaana ka dhex muuqda David Beckham oo xambaarsan ilmo yar oo reer Brazil ah, xili uu ku sugan yahay kaymaha dhexdooda. Sida lagu sheegay warbixin laga qoray filmka, deegaanka uu ku sugnaa Beckham wakhtiga uu filmka metelayay ayaa ah deegaamo aan aad looga aqoonin oo aanu caan ka ahayn.
David, waxa uu sahaminayay intii uu filmkaas metelayay kulaylka iyo cimilada wadanka Brazil oo uu dhawaan ka qabsoomayo Koobka Adduunka, khaas ahaan waxa uu tegay magaalada kaymuhu qariyeen ee Manaus oo ciyaarta ugu horreysa ay ku kulmi doonaan England iyo Italy.
Filmkan oo loogu magac daray: David Beckham: Into The Unknown – oo ay macnaheedu tahay David Beckham oo ku sugan meel aan laga garanayn, ayaa mooto ku dhex kaxaystay kaymaha Amazon, iyadoo ay wehelinayaan koox jileyaal ah oo filmka la metelaysay, kuwaas oo kala ahaa saaxiibadiisa Anthony Mandler, Dave Gardner iyo koox kale, waxaana la sheegay in uu deegaankaas aad uga helay ciyaartoygan hore ee Real Madrid, Manchester United iyo LA Glaxy.
David Beckham ayaa markii uu filmku dhamaaday, waxa uu ka sheekeeyey dareenkiisii, waxaanu sheegay in uu aad u baqanayay markii uu ku sugnaa kaymaha, caadona ay u tahay inuu ka cabsado nolosha duurka khaasatan kuwa Brazil oo ah meelaha adduunka ugu dhirta badan, lagana helo xayawaano kala duwan, kuwaas oo halis gelin kara naftiisa.
Dhacdooyinka yaabka leh ee uu la kulmay waxa ka mid ah, Rah midabkiisu kala duwan yahay oo uu la kulmay, waxaanu yidhi mar uu Isniintii ka sheekeeyey qisaska waxyaabihii uu la kulmay “Anigu kama helo Raha. Waxa uu ahaa (Rahaas) liimi dhalaalaya, waxaana la ii sheegay in uu khatar yahay, waanan ka baqayay.”
Arrinta kale ee naxdinta weyn ku reebtay Beckham ayaa waxa ay ahayd markii uu arkay godad waaweyn oo ka daloola doonni ay ku safrayeen webi dhexdii, waxaanu yidhi “Waxa aanu dhex soconay biyo cabsi leh, waxaanan ogaaday inay doonnidu dal-daloosho. Waxaan xidhay jaaket si aan biyaha uga badbaado, ma jirin meel laga baxaa, waanan quusi gaadhay”.
Beckham waxa uu sheegay in uu aad u baqday markii uu arkay mas jooga halkii uu filmka ku metelayay.
Ciyaartooyada Somaliland Ee Ka Qayb-gelaya Koobka Adduunka Ee Abkhazia Oo Garamadii Ay Ku Ciyaarayeen La Soo Bandhigay
24/05/2016 Abdiwahab Ahmed